Nandrolone Cypionate Mamatsy akora mpanamboatra & mpamatsy vola - Orinasa
Ny Candrionate Nandrolone dia heverina ho iray amin'ny kalitao avo indrindra ary iray amin'ireo mora indrindra handefasana steroids anabolika izay efa noforonina., Izay natao tamin'ny hormone 19 Nortestosterone. Eterônin'ny Nandrolone izay tena mitovy amin'ny steroids Deca, ary ny fiarovana dia ny fanovana iray izay ahafahana manatsara bebe kokoa sy ny fampidinana haingana ny vatana.
Nandrolone Cypionate Rohan'ny fitaovana (601-63-8) video
Nandrolone Cypionate Raw material (601-63-8) Description
Nandrolone Cypionate (Dynabol) Ny fitaovana vita amin'ny vatosoa dia sokajiana ho steroide anabolic androgenic, izay natao tamin'ny hormone 19 Nortestosterone Nandrolone. Nandrolone Cypionate Ny fitaovam-pitaovam-piasana dia koa 17-B ester of nandrolone.Nandrolone Cypionate Raw material dia atolotra ho fanampiana ny fitsaboana reraka rehefa maniry ny manatsara ny lanjany, ny akanjo volon'ondry na ny toe-batana ankapobeny. Ny fanararaotam-po dia matetika manaraka aretina na mety hitranga aorian'ny fanaovana asa an-tery sy fisalasalana. Ny Nandrolone dia manatsara ny toe-pahasalamana ankapobeny, ka manampy amin'ny fanitsiana ny fatiantoka mavesatra sy ny fihenan'ny alahelony. Tsy mety ho an'ny sakafo voalanjalanja izany. Ny vokatra tsara indrindra dia azo antenaina raha tsy ampiasaina ny fomba fitantanana tsara sy fikarakarana.
Rehefa mijery ny fitaovana Rano Nandrolone ianao, ny Estera Cypionate, izay sokajina ho lehibe, dia mametraka ny hormone Nandrolone ary izany no manampy amin'ny famoahana azy ao anatin'ny fe-potoana voafetra. Raha vao miditra ao amin'ny ra ny Nandrolone Cypionate Raw, dia misy ny familiana ny esters ka mamela ny hormonina hiditra ao amin'ny rafitra. Izany dia mitarika amin'ny fampakarana haingana ny Nandrolone ao anatin'ny ora 48 amin'ny fidirana ao amin'ny vatana, arahin'ny fanafahana maharitra sy maharitra tsy tapaka mandritra ny antsasaky ny 2-herinandro.
Anarana simika Ny 17beta-hydroxyestr-4-en-3-iray 17- (3-cyclopentylpropionat); Citrionate Nandrolone; ; 17-Nortestosterone 4-cyclopentylpropionate; Nandrolone cypiontate
Brand Name Anabo, Depo-Nortestonate, Dynabol,
molekiolan'ny Formula C26H38O3
molekiolan'ny Wvalo 398.57812
mitsonika Point 80-82 ° C
Toro-tavy: 525 ° C amin'ny 760 mmHg
Color fotsy fotsy fotsy
Application Nandrolone Cypionate Ny fitaovam-piasana Rohibe dia atolotra ho fanampiana ny fitsaboana ny aretina raha ilaina ny fanatsarana ny lanjany, ny akanjo volom-borona na ny toe-batana ankapobeny.
Inona ny fitaovana vita amin'ny Nandrolone Cypionate (601-63-8)?
Nandrolone Cypionate Ny fitaovam-piasana Rohibe dia endriny iray amin'ny endrika anabolic steroid. Ity ety ity dia manome ny lozam-pamokarana hormonina mitovitovy mitovy amin'ny an'ny testosterone cypionate, ary ny haavon'ny tsimokaretina dia voamarika manodidina ny 24-48 ora aorian'ny fitantanana, ary ny famotsorana hormonina lehibe izay notohanana nandritra ny herinandro maromaro. Amin'io tranga io, ny hormone mivaingana dia ny nandrolone, izay steroid anabolic steroid izay miteraka toetra mahasalama estrogenic sy androgenic.
Io vokatra io dia tena mitovy amin'ny vokatra ankapobeny amin'ny vovon-koditra Deca-Durabolin (nandrolone decanoate vovoka), izay mamokatra haingam-pandrefesana amin'ny tanjaka sy ny tanjaky ny masin'ny muscules, izay miara-miasa amin'ny fihenan-tsakafo ambany. Ny iray amin'ireo fahasamihafana dia ny fiheveran'ny Nandrolone Cypionate Raw raha toa ka misy fiaraha-miasa haingana kokoa ho an'ny mpampiasa sasany. Raha tsy izany dia tsy misy fahasamihafana hita eo amin'ireo singa roa ireo, ary ny fitaovana Nandrolone Cypionate Raw dia afaka manolo vovo-dronono nandrolone amin'ny ankapobeny.
Ahoana ny fametrahana fitaovana Rohanitra Nandrolone (601-63-8) asa
Nandrolone Cypionate Ny fitaovan'ny zavamaniry dia endrika fanovana natorontana, izay misy ny asidra karbonila (asidra sikopentylpropionika) mifandray amin'ny vondrona hydroxyl 17-beta. Ny steroids esterified dia latsa-po kokoa noho ny steroids maimaim-poana, ary mihamitombo tsimoramora kokoa avy amin'ny faritra famoahana. Indray mandeha ao amin'ny renirano, dia esorina ny ester mba hanomezany (nandrisika) gratis nandrolone. Ny steroide esterified dia natao mba hampandrosoana ny varavarankelin'ny vokatra ara-pahasalamana manaraka ny fitantanana, izay mamela ny fandaharam-potoana tsy dia matetika loatra raha oharina amin'ny injections amin'ny steroid steroid. Ny pneuone nandrolone dia manome tsiranoka maranitra ao amin'ny nandrolone hafahafa 24-48 ora aorian'ny fampidirana intramuscular lalina, ary manohana ny famoahana hafanana hormonina mandritra ny herinandro 2.
Fa Men: Raha ampiasaina amin'ny tanjona ara-batana na fampivoarana ny fampiharana, ny doka 200-400 mg isan-kerinandro dia mahazatra, nalaina tao amin'ny cycles 8 hatramin'ny herinandro naharitra 12. Ity sehatra ity dia ampy ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa mba hahatsikaritra ny mason-tsakafo amin'ny tanjaky ny tanjaky ny hery sy ny tanjaka, izay tokony hiara-dia amin'ny hetsika ambany etrogenika sy androgenic. Na dia mety hiteraka voka-dratsiny mahery vaika kokoa aza ny dosage (450-600 mg), raha oharina amin'ny 50 mg / mL ny habetsaky ny 400 mg. Raha ny tokony ho izy, dia matetika ny dokotera no ampiasaina amin'ny mpitsabo hafa, matetika ny androgen toy ny testosteron injectable, izay manampy koa ny mampiakatra ny tsy dia kely loatra ny androgenicity ny nandrolone. Ny endri-tso-tsigara amin'ny endrogenic, toy ny mandrandrostenolone na ny oxymetholone, dia ampiasaina indraindray, fa hanolotra hepatotoxicity koa izy ary misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny serum-lipida (ratsy).
Fa vehivavy: Raha ampiasaina ho tanjona ara-batana na fampivoarana ny fampiharana, dia mahazatra ny tahan'ny 50 mg isan-kerinandro. Na dia kely fotsiny aza ny androgenic, dia indraindray ny vehivavy dia mifanandrify amin'ny soritr'aretina virilization rehefa mandray io vondrona io. Tokony hikorontan-tsaina ny virulizing ny vokatra hafa, ny fitaovam-panafody Nandrolone dia tokony hijanona avy hatrany mba hanampy amin'ny fisorohana ny fisehoany maharitra. Taorian'ny fotoana nisintonana ny fotoana dia azo heverina ho safidy (safidy azo atao kokoa) ny volo manodina kokoa ny Durabolin. Ity fanafody ity dia mijanona mandritra ny andro maromaro, ary mampihena be ny fotoana fialan-tsasatra raha voalaza.
Nandrolone Cypionate Raw material (601-63-8) soa
Ho an'ny atleta sy ny olona tsy an-taonany, ny fitaovam-panorenana Nandrolone Cypionate dia afaka manaporofo fa tena fitsaboana ary manolotra tombontsoa maro tadiavina. Raha ny momba ny Nandrolone, dia ampiasaina ho ampahany amin'ny testosterone - stack Anadrol. Ankehitriny, misy ny hery goavana amin'ny fitomboan'ny isan'ny hozatra amin'ny farafaharatsiny, saingy tsy hitranga mandritra ny alina izany. Ny masin'ny mozika dia eo amin'ny tsipika miadana sy maharitra.
Nandrolone Cypionate Ny fitaovam-piasana Rohibe dia manolotra ireo toetra mahasalama hanampy amin'ny fitehirizana ny fihinan'ny voanjo ary ny tena zava-dehibe amin'ny fotoanan'ny fifadian-kanina sy ny kaloria maneran-tany.
Raha misy olona iray mandray anjara amin'ny kaloria dia mametra ny fisakafoanana amin'ny fikolokoloana, ny vatana dia matetika no manomboka manabolize ny masiriry hohanina mba hanandrana hanolo ny loharano tsy hita. Na dia miaraka amin'ny sakafo voaaro tsara indrindra aza, dia mety hitera-doza ny voka-dratsin'ny tazomoka ary ampiasaina ho an'ny angovo ary amin'ny fampiasana steroide Nandrolone Cypionate na mitovy ny steroide anabolique hafa, dia mety hitera-doza izany. Mazava ho azy, misy ihany koa ny tombontsoa azo avy amin'ny tahan'ny fihenana na fihatsarana, izay zava-dehibe amin'ny fampiofanana mafy ny vatanao. Izany dia manampy ny olona hanangana ny vatany amin'ny hozatra ary hanamboatra ny vatan'ny vatana haingana sy haingana.
Buy Nandrolone Cypionate Rohstoffe (601-63-8) avy amin'ny Buyaas.com
Rano Trestolone Acetate (MENT) vovoka (6157-87-5)
Rano Nandrolone tsy dekoanoate (862-89-5)